Amazwe Avakashelwa Kancane Emhlabeni - Ukuhamba
Lawa Amazwe Angavakashelwa Kancane Emhlabeni — Ingabe Uke Waba Khona Kuzo Zonke Zawo?
These Are World S Least Visited Countries Have You Been Any Them
IParis neBarcelona yizindawo ezinhle ongazivakashela. Inkinga kuphela? Wonke umuntu ucabanga kanjalo, naye. Esikhundleni salokho, yiba nazo zonke izinto zokuzibonela ngokwakho kwelinye lamazwe angavakashelwa kakhulu emhlabeni. Lapha, amazwe ayisikhombisa emhlabeni embulwa ngu Inhlangano Yezizwe Yezokuvakasha Yomhlaba Wonke njengabavakashi abambalwa, kusukela epharadesi lasePolynesia kuya etsheni eliyigugu elifihlekile laseYurophu.
OKUSHIWO: Izindawo Eziyimfihlo Zamabhajethi eYurophu Ukuvakashela i-ASAP
RossHelen / Getty Izithombe
ILiechtenstein (izivakashi ezingama-69,000)
Iphakathi kweSwitzerland ne-Austria, iLiechtenstein yizwe lesithupha elincane kunazo zonke emhlabeni. Kodwa ungakhohliswa usayizi wayo — nezinqaba zayo ezinganekwane, ubuhle bezintaba nomlando wasebukhosini othakazelisayo, le ndawo emnandi inokuningi ongakunikeza. Isifunda asinaso isikhumulo sezindiza, ngakho-ke izivakashi kufanele zindizele eZurich eseduze kunalokho.
izithombe zamagumbi amahhotela okunethezeka
UPatrick AVENTURIER / Getty Izithombe
I-Tuvalu (izivakashi ezingama-2 000)
Uma ucashile, unamabhishi amahle anezithombe yilokho okulandelayo, bese ungabheki ngaphezu kwalolu chungechunge lweziqhingi ezinhle eziyisishiyagalolunye ezitholakala cishe maphakathi neHawaii ne-Australia. Ngamazinga okushisa okushisa eTuvalu, amanzi acwebezelayo aluhlaza nesihlabathi segolide, kunzima ukukholelwa ukuthi lesi siqhingi ipharadesi sasinezivakashi ezingama-2 000 kuphela ngonyaka odlule.
SimonDannhauer / Getty Izithombe
IBelize (izivakashi ezingama-386,000)
Amanxiwa aseMayan, isiqhingi semigoqo ebabazekayo esingamamitha angama-200 ubude kanye namahlathi aluhlaza asezindaweni ezishisayo ngezinye zezizathu zokubheka izwe laseCentral America elingavakashelwa kakhulu. Abafuna i-Adrenaline ikakhulukazi bazothanda i-zip-lining ehlathini, bashushuluze nge-scuba diving iGreat Blue Hole edumile, abagibele amahhashi ngamagquma aluhlaza nangesikebhe (noma i-tubing tubing) phansi kwemifula.
Leonid Andronov / Getty Izithombe
I-San Marino (60,000)
Yeqa izixuku zabavakashi eTuscany bese uya kuleli zwe eline-teeny (linabantu abangaba ngu-30,000) enyakatho ye-Italy ngokubuka okufanayo okuhle okufayo nokudla okumnandi newayini (oh, nokuthenga okungakhokhiswa intela).
Izithombe ze-Abenaa / Getty
ISierra Leone (74,400)
Leli lizwe laseNtshonalanga Afrika laba sematheni ngesikhathi senhlekelele ye-Ebola emuva ngonyaka wezi-2014 kodwa kuthathwe njengokuphephile futhi okungenayo i-Ebola kusukela ngoMashi 2016. Ukuhambela lapha hhayi nje ukusiza imizamo yezwe yokuthola kabusha kodwa nokuhlola amabhishi anezintende zesundu, ukudla okumnandi kwasendaweni ( cabanga: izitshulu ezibabayo, ukhova othosiwe nezinhlanzi eziningi) nabantu bendawo abanobungane.
I-CalinStan / Getty Izithombe
Qaphela, ama-oenophiles — iRiphabhuliki yaseMoldova inesiko elicebile lokwenza iwayini elisukela ku-3000 B.C. Eqinisweni, i- I-Milestii Mici winery uphethe iGuinness World Record yeqoqo elikhulu lewayini. Kepha kukhona okuningi kulesi sizwe esincane kunamagilebhisi (noma kunjalo zama iChardonnay). Ihlanganisiwe phakathi kwe-Ukraine neRomania, leli zwe laziwa nangama-monasteries alo namagquma aqengqelekayo-alungele i-adventure yebhayisikili (vele ungaphuzi futhi ujikeleze).
StephenChing / Getty Izithombe
Bafo, leli zwe elincane e-Himalaya lilinganisa umcebo walo (isb., GDP) ku injabulo. Iphinde inama-monasteries amahle amaBuddhist, iziqongo zezintaba ezinhle nemikhosi enemibala. Ukuhambela lesi sizwe semilingo akubizi, kepha-zonke izivakashi kudingeka zikhokhe intela yokuhamba yansuku zonke engu- $ 200 (noma ngaphezulu, kuya ngesizini); kepha lokho kufaka indawo yokuhlala, ukudla, umhlahlandlela wokuvakasha kanye nezinto zokuhamba zangaphakathi.
indlela yokunciphisa amafutha okhalweni ngokuzivocavoca umzimba
OKUSHIWO: Izindawo Ezingakholeki Zokuvakashela Ngaphambi Kokuphuma Kwezwi
hollywood love story movie uhlu
uhlu lwamafilimu entsha
yeka izinwele ukuwa amathiphu okuzenzela
amathiphu wokulawula ukuwa kwezinwele ngokwemvelo
izincwadi eziphezulu eziyi-10 zezocansi
izinzuzo zama-alimondi ekukhuleni kwezinwele